FITSARANA ANOSY : EFA NISAZY ROA TAONA VAO NAVOTSOTRA NOHO NY TSY FISIAN’NY POROFO ILAY RAIM-PIANAKAVIANALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYFITSARANA ANOSY : EFA NISAZY ROA TAONA VAO NAVOTSOTRA NOHO NY TSY FISIAN’NY POROFO ILAY RAIM-PIANAKAVIANA
FITSARANA ANOSY : EFA NISAZY ROA TAONA VAO NAVOTSOTRA NOHO NY TSY FISIAN’NY POROFO ILAY RAIM-PIANAKAVIANA
Omaly no niatrika ireo mpitsara voalohany taorian’ny fiatrehany ny fampanoavana tamin’ny taona 2016, ilay raim-pianakaviana manodidina ny 30 taona. Voatondro ho tompon’antoka tamina fanolanana sy fandrobana teny Mahazoarivo izy ary avy hatrany dia nidoboka vonjimaika teny Antanimora. Hita fa sahirana anefa omaly ireo mpitsara dimy niampy ny lehiben’ny fampanoavana nandray ny raharaha momba azy.
“Tsy misy porofo nahafahana niampangana azy mivantana. Ireo sarin’ilay vehivavy naratra nilaza ho voaholana izay tsy nahafahana namantatra izay tompon’antoka miampy ny antsipirihan’ny zava- nitranga no eto am-pelatànany”, hoy ny lehiben’ny mpitsara.
Rehefa nohadihadiana nanoloana ny fitsarana rahateo ilay voampanga dia nilaza fa tsy nanana olana tamin’ireo olona nitory azy. Ireo vavolombelona dimy ihany koa dia nanamarina ny tsy nahateo an-toerana azy nandritra ny fanolanana sy ny fandrobana.
Nandeha ila ihany moa ny raharaha satria tsy hita nanotrona ity fitsarana ity na ilay vehivavy nilaza ho lasibatry ny herisetra, na ihany koa ny solontenany. Ireo mpitsara anefa tetsy an-danin’izany niezaka nanao izay nibabohan’ilay voampanga, raha toa ka meloka izy, saingy nandamoaka izany. Naharitra 15 minitra teo ny fihainoana azy, nisintona 10 minitra ny fitsarana ary taorian’izany no nanononan’ny mpitsara fa afaka madiodio ilay raim-pianakaviana. Rehefa nanontaniana moa ny renin’ity olona nisazy tany am-ponja ity dia nilaza ny tsy hampiakatra ny raharaha fa hifaly amin’ny fahafahan’ny zanany.
Partager la publication "FITSARANA ANOSY : EFA NISAZY ROA TAONA VAO NAVOTSOTRA NOHO NY TSY FISIAN’NY POROFO ILAY RAIM-PIANAKAVIANA"
comprendre le monde 18/05/2018 at 12:27 Repondre
L’islam c’est la tempérence, c’est la raison. http://www.m-islam.fr/les-signes-de-lheures-selon-farid-islam/